Madaxda dowladda oo isku khilaafsan Magacaabista Wasiirada Cusub (XOG CUSUB) | Nabadqaad Online
Madaxda dowladda oo isku khilaafsan Magacaabista Wasiirada Cusub (XOG CUSUB)
Xogaha hoose ee la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in sababta illaa iyo hadda loogu dhawaaqi la’ yahay xubnaha golaha wasiirrada ay tahay is-maandhaaf culus oo ka dhex jira madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya.
Ilo ku dhaw madaxtooyada ayaa shabakadda Nabadoon.com u sheegay in is-maandhaafkan uu sii xoogeystay xalay, ka gadaal markii lagu kala tegay munaasabad loo ballansanaa in lagaga dhawaaqo xubnaha golaha wasiirrada.
Munaasabaddan ayaa waxaa lagu martiqaaday xubnaha labada aqal ee dowladda Soomaaliya iyo marti-sharaf kale, waxaana la filayay in uu ra’isul-wasaaruhu goobtaas ka sheego magacyada xubnaha golihiisa cusub ee wasiirrada.
Hase ahaatee, intii la sugayay ku-dhawaaqista wasiirrada ayaa waxaa martidii goobta joogtay lagu wargeliyay in ay howshu dib u dhacday, oo munaasabaddana la soo xirayo.
Goob-joogayaal ayaa laga soo xigtay in sababta ugu weyn ee dib-u-dhaca keenay ay tahay khilaaf soo kala dhexgalay guddoomiyaha Madaxweynaha iyo Raisul-wasaaraha oo dhinac ah, iyo guddoomiyaha Baarlamanka.
Wararka ayaa intaas ku daray in guddoomiyaha Baarlamanka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu saluugay liiska ay madaxweynaha iyo ra’isul-wasaaruhu la wadaageen, oo ay ku qoran yihiin xubnaha golaha wasiirrada. Waxaana uu Jawaari ka diday qaar ka mid ah xubnaha liiska ku qoran oo ay labada mas’uul soo xusheen iyaga oo aan kala tashan beelaha ay xubnahaas ka soo jeedaan.
Dadka xaaladdan sida dhaw u la socday ayaa ku warramay in mudane- Jawaari uu ku adkeystay in dhismaha golaha wasiirrada lagu saleeyo habka awood-qeybsiga beelaha ee ay dowladdu ku dhisan tahay, isla markaana laga fogaado in xilal loo dhiibo dad ay madaxda dowladdu xiriir dhaw leeyihiin, oo aan kalsooni ka heysan beelahooda.
Xeel-dheerayaasha siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro guux hareerayay xafiisyada dowladda, kaas oo sheegaya in madaxweynaha iyo ra’isul-wasaaruhu ay u xusul-duubayaan sidii xilalka ugu muhiimsan xukuumadda cusub loogu magacaabi lahaa shakhsiyaad iyaga u dhaw, kuwaas oo qaarkood ay maalmihii la soo dhaafay Muqdisho imaanayeen.
Xildhibaannada Baarlamanka qaarkood oo dadaal ugu jiray in ay ka mid noqdaan xukuumadda cusub ayaa hadda ka walwalsan in madaxda dowladdu ay xilalka wasaaradaha la doonayaan shakhsiyaad iyaga ku dhaw dhaw, oo ay ku jiraan diblumaasiyiin iyo siyaasiyiin dibadaha ka imaanaysa.